Seddaxley uu dhaliyay Lionel Messi oo ka caawisay Barcelona in sahal ay ku dhaafto PSV iyo Inter oo xili Dambe Guul soo laabasho ah ka Gaartay Dhigeeda Tottenham. – Gool FM
( Champ’ League ) 18 Sab 2018. Kulanka garoonka Camp Nou ayaa lagu kala maray qeybta hore 1-0 iyadoo labada dhinac ay abuureen furado halis ku ahaa goolka.
Barcelona waxaa goolka daah furka u dhaliyay Lionel Messi wuxuuna ahaa kubbad Free Kick ama Laadka xorta ah daqiiqadii 32-aad.
Waxaa jirtay dhawr fursad oo ay goolka ku bartilmaameed sadeen kooxda PSV Eindhoven balse uma suuragalin iney garaan goolka Barca.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha Labaad Barcelona ayaa wax ka badashay hanaan cayaareedkooda iyadoo weerar is daba jooga ku hayay goolka naadiga reer Holand.
Dheeshu markii ay socotay daqiiqadii 75-aad Ousmane Dembele ayaa Barcelona u dhaliyay goolka labaad waana goolkii afaraad uu dhaliyay afar kulan xariira ninka reer France.
Laba daqiiqo kaddib Barca ayaa dheereysatay Hogaanka waxaana goolka seddaxaad u dhaliyay Kabtankooda Lionel Messi.
Laakiin waxaa cayaarta laga saaray oo jaalihii labaad ka qaatay daafaca Samuel Umtiti.
Cayaarta oo socota daqiiqadii 88-aad Lionel Messi ayaa dhameystiray goolasha seddaxleyda loo yaqaan markii uu goolkii afaraad u dhaliyay kooxdiisa Barca.
Dhinaca Kale naadiga Inter Milan oo muddo Lix sano kaddib kusoo laabatay koobka Champions League ayaa guul soo laabasho cajiiba ka gaartay Tottenham.
Naadiga Spurs ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay xiddigooda Christian Eriksen daqiiqadii 54-aad ee qeybta dambe kulanka.
Inter dhankeeda ayaa mar ku dhawaatay inay helaan goolka barbaraha markii uu madax halisa uu goolhayaha Tottenham ka badbaadiyay laacibka Ivan Perisic
Kulanka oo ay ka hartay shan daqiiqo kabtanka kooxda Inter Mauro Icardi ayaa u barbareeyay kooxdiisa goolka lagu hor kacayay markii uu kubbad aan dhulka dhicin goolka ku hubsaday taa oo aheyd diib uu soo dhigay daafac Kwadwo Asamoah.
Sheekada cayaarta ayaa is badashay daqiiqadihii dheeriga ee lagu daray markii kooxda Guriga ee Inter ay dhalisay goolka guusha waxaana Madax kubbad lagu soo baasay Madax kale ku dhameystiray laacibka Matias Vecino oo Guul Muhiima u gacan galiyay Naadiga Nerrazurri.